गोर्खा भिलेज रिसोर्ट निर्माण कार्य फेरी पुनर्निमाण होला त ? - USNEPALNEWS.COM
- खिम लामिछाने प्रकाशित मिति: October 21, 2016
पोखरा-५, पोखराको पर्यटनमा बिशेष योगदान दिने उदेश्यले २०५२ मा पोखाराको मजेरी पाटनमा गोर्खा भिलेज रिसोर्ट निर्माण कार्य सुरु गरियको थियो । उक्त रिसोर्ट निर्माणको कार्य सँगै देशमा नेकपा माओबादी श-सस्त्र बिद्रोह सुरु भएको थियो ।
निर्माण कार्य त्रिब्र गतिमा चल्दै गर्दा उतातिर नेकपा माओवादीको स-सस्त्र आन्दोलन पनि चर्कदै थियो। रिसोर्टको समरचना निर्माण कार्य सगसगै आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरुलाई स्विजरल्यान्डमा तालिम लिन समेत पठाइ सकेको थियो । तर निर्माण कार्यको बिचैमा माओबादीको समस्याको करणले निर्माण कार्य अबरुद्ध भएको थियो ।
लगभग १२ करोड लगानी गरी सकेको अवस्थामा तत्कालिन नेकपा माओबादी र रिसोर्ट लगानी कर्ता बिच एकआपसमा समाजदारी कायम हुन नसके पछी उक्त रिसोर्टको निर्माण कार्य पूर्ण रुपमा स्थगित भएको थियो ।
अहिले उक्त रिसोर्ट भाग्नाशेसमा पारीणत भईसकेको छ भने निर्माण भैइसकेका समरचनाहरुको छानामा घास उम्रेको पाहिन्छ । एद्देपी पोखराले उक्त रिसोर्ट कुनै दिन पुन निर्माण हुन्छ भनी आस गरिरहेको छ । उक्त निर्माधिन अवस्था मै निर्माण कार्य नै बन्द गरियको गोर्खा भिलेज रिसोर्ट सँगै रहेको हिमालयन गल्फ कोर्स भने सन्चालनमा नै छ र बेला-बेला गल्फ खेलका बिभिन्न राष्ट्रिय अन्त-राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु हुने गर्दछन । उक्त स्थान पर्यटकिय दृष्टिाले निकै महत्वोपूर्ण मानिन्छ ।
पोखराका केहि पर्यटक ब्यबसायी भने गोर्खा भिलेज रिसोर्ट फेरी पुनर्निमाण हुन्छ, कोहि न कोहि आएर यसलाइ पूर्णता दिने कुरामा बिस्वस्थ छन । बिस्तारै पर्यटक उद्योग खोल्ने ठाउको अभाबको अनुभूति हुना साथ यो प्रोजेक्ट फेरी सुचारु हुने अनुमान गरेका छन् पोखरेलीहरुले किनकि यो ठाउ पर्यटकलाइ लोभ्याउने अन्नापुर्ण र माछापुच्छ्रे शृंखलाहरु १८० डिग्रीको कोणमा देखिने भयकोले पनि यो फेरी खुल्न जरुरि छ । प्रयाप्त रोजगारी र पर्यटकको लागि राम्रो गन्तब्य बोकेको ठाउ हो यो गोर्खा भिलज रिसोर्ट !
राष्ट्रिय पोशाक कुनै जात र धर्मका मानिसको होईन: कमल थापा
अमेरिकी आप्रवासन थुनामा किशोरको मृत्यु